Firm plastic cover zezindlu ezingeni eliphezulu of ukuvikelwa OtterBox wasemuva Series Case for BlackBerry 9360 / 9370 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Firm plastic cover zezindlu ezingeni eliphezulu of ukuvikelwa OtterBox wasemuva Series Case for BlackBerry 9360 / 9370 Curve
Izinga eliphakeme kunawo eyisivikelo BlackBerry yakho, siqukethe eziningi njengoba ezintathu izingxenye! Kakhulu uvikela idivayisi kusukela cishe noma yimuphi umonakalo, futhi ibuye iyehlisa amathuba nesenzakalo yabo! ukubukeka Excellent. Le filimu zokuzivikela sinamathela.
Firm plastic cover zezindlu holster ruggedized OtterBox wasemuva Series Case for BlackBerry 9360 / 9370 Curve — eliphakeme ukuvikelwa BlackBerry yakho! Manje ungakwazi Ungesabi yanoma yimuphi umonakalo (uthuli, umswakama, imihuzuko, ukungcola, imihuzuko, ngisho yokundindizela)! Wasemuva Series Case — ubuye ukubukeka omuhle futhi liyabonakala isitayela OtterBox.
Case kuhlanganisa timphawu letintsatfu eyizingqabavu zokuzivikela: luhlaka esiqinile elingaphakathi epulasitiki, esemgwaqweni ngaphakathi kwesembozo ifoni; kulandelwa aminyene yangaphandle abicah icala lokuthi kungathambisa igalelo ekwindla. On ikhava phezulu wagqoka esindayo-duty plastic holster evikela screen sakho ekulimaleni BlackBerry, futhi kakhulu ukunciphisa amathuba smartphone bangawi bese ushiye izandla zakho mahhala. Cover lungasetshenziswa ngaphandle holster, njengoba isesekeli ahlukene. Uma usebenzisa i-cover ngokwehlukana ukufinyelela esikrinini futhi ikhibhodi zingavuiwa, ukuvumela ukusebenza BlackBerry ngendlela evamile. Kukhona futhi enamathela ekhethekile eziseceleni.
Complete nge cover kuyinto esobala ifilimu zokuzivikela for the screen.
Firm plastic cover zezindlu ezingeni eliphezulu of ukuvikelwa OtterBox wasemuva Series Case for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black (Black) RBB2-CRV93-20-E4OTR ●
Price: $90 $12